उच्च कोटिको प्रिमियम एसयुभी : स्टेयरिङ समातेर गुडाउन थालेपछि फिल हुन्छ जसको सबलता | Automotive News Nepal
उच्च कोटिको प्रिमियम एसयुभी : स्टेयरिङ समातेर गुडाउन थालेपछि फिल हुन्छ जसको सबलता ४ जेठ, २०७५
पिउजोको ३००८ एसयुभीले गत वर्ष युरोपको ‘कार अफ दि इयर’को अवार्ड पाउँदा कारप्रेमी नेपालीहरुले पक्कै पनि उक्त सवारी साधन आफ्नो बनाउन पाए हन्थ्यो भन्ने सोचे । अझ सोही साल उक्त एसयुभी डकार कार ¥यालीमा बिजेता बनेको थियो, जसले विश्वभरकै ध्यान उक्त कारमा तान्यो । अवार्ड र विजेता लगातार पोल्टामा हालेको कार हाँक्न कसलाई मन नलाग्ला ? आउनोस् एकैछिन विख्यात यही कारमा सवार होऔं ।
बनोटका हिसावले पर्फेक्ट फिनिसिङ दिएको पिउजोको यो प्रिमियम गाडी देख्नासाथ सबैलाई प्रभावित गर्न सक्षम छ । लाग्छ, यसको नेपाल आगमनले प्रिमियम क्लासका ग्राहकलाई भरपर्दो र सजिलो विकल्प दिएको छ । स्लिक डिजाइनमा आधारित यो एसयुभीको बडी निकै आकर्षक छ ।
उच्च कोटिको प्रविधि र सुविधा
कारभित्र उपलव्ध इन्टेरियर फिचर्सको आधारमै त्यसको स्तरीयता मापन हुन्छ । यो मापनमा पिउजो ३००८ असफल हुने कल्पनै नगरेको राम्रो । फेरि युरोपयन गाडीको सवैभन्दा मजवुत पक्ष भनेकै गाडीभित्र उपलव्ध आरामदायी र सुविधासम्पन्न फिचर्स हुन् । पिउजो ३००८ को हकमा पनि यहि लागु हुन्छ । एउटा स्तरिय कारमा उपलव्ध हुनुपर्ने सवै फिचर्सहरु उपलव्ध गराइएको छ यो एसयुभीमा । मसाज फङसन सहितको स्तरिय लेदर सिट, पर्याप्त लेग स्पेस, बातानुकुलित एसी, अत्याधुनिक इन्फोटेन्मेन्ट सिस्टम, कम्फर्ट ड्राइभिङ र अन्य थुप्रै प्रविधीमैत्री विशेषताले यो गाडीलाई उच्च कोटीमा दर्ज गराएको छ ।
यसमा जडान भएको आई–ककपिट भर्चुअल ड्यासबोर्ड सुपेरियर छ । थ्री डि कनेक्टेड नेभिगेसन, १२.३ इन्चको हेडअप डिजिटल इन्स्ट्रुमेन्ट प्यानल, ८ इन्चको सेन्ट्रल टच स्क्रीन जस्ता फिचर्सले गाडीलाई अत्याधुनिक र सुविधासम्पन्न बनाएको छ । पिउजोको इन्टेरियर हेर्दा जत्ति आकर्षक र भव्य देखिन्छ त्यत्ति नै बढी आनन्ददायी पनि छ ।
पिउजो ३००८ लाई बाहिरबाट हेर्दा जति भव्य र आकर्षक देखिन्छ, चलाउँदा त्यो भन्दा बढी आनन्द फिल हुन्छ । आखिर लक्जरियस कारको प्रमुख विशेषता नै यहि हो । गाडीको स्टेरिङ समाउने बित्तिकै गाडीको कम्फर्ट थाहा पाउन सकिन्छ । जव गाडीलाई स्टार्ट गरेर चलाउन थालिन्छ, यसको असली पर्फमेन्स फिल भईहाल्छ । यो एसयभीको ड्यासबोर्ड अत्याधुनिक र प्रविधीमैत्री छ । जहाँबाट चालकले आफ्नो आवश्यकता अनुसार विभिन्न फिचर्सलाई प्रयोगमा ल्याउन सक्छन् । गाडीभित्र फोकल कम्पनीको म्युजिक सिस्टम, कार प्ले, मिरर लिंक, मिरर स्क्रिन, १८० डिग्रीको कलर रिभर्स क्यामेरा, थ्रीडी नेभिगेसन, फ्रन्ट वाइपर्स लगायतका फिचर्स छन् ।
त्यसैगरी फ्रन्ट एण्ड रेयर पार्किङ सेन्सर, लेदर स्र्पोटस स्टेरिङ ह्वील, क्रुज कन्ट्रोल विद स्पीड लिमिटर, डुअल जोन क्लाइमेट कन्ट्रोल छ । ५ सिटे यो यसमा रेयर एयर भेन्ट्स, अटो डिमिङ रियर भ्यु मिरर, ड्राइभर स्र्पोटस प्याक, पावर स्टेयरिङ, गेयरबक्स रेसपोन्स लगायतका फिचर्स पनि छन् । यसमा डिजिटल रेडियो, एपल कारप्ले एण्ड एन्ड्रोइड अडियो, स्मार्टफोन चार्जिङ प्लेट, आल्मुनियम रुफ बार्स, एलईडी डे टाइम रनिङ लाइट, अटोमेटिक विन्ड स्क्रीन विपर्स लगायतका फिचर्स पनि छन् । साथम उत्कृष्ट सनरुफ पनि उपलव्ध गराइएको छ ।
सर्वोत्कृष्ट पावर र पर्फमेन्स
१ हजार ६ सय सिसी इन्जिन क्षमताको यो एसयुभीमा १ दशमलव ६ लिटरको टर्बो पेट्रोल इन्जिन जडान गरिएको छ । जुन युरो ६ मापदण्डमा आधरित हो । ६ स्पिड अटोमेटिक ट्रान्समिसनयुक्त पिउजो ३००८ को अधिकतम पावर ६ हजार आरपिएममा १ सय ६५ एचपी र १ हजार ४ सय आरपिएममा २ सय ४० एनएम टर्क रहेको छ । त्यस्तै ग्राउन्ड क्लिरियन्स २ सय १९ एमएम छ । जुन नेपाली बाटो सुहाँउदो मानिन्छ । यो एसयुभीलाई २ सय ८ किलोमटिर प्रतिघन्टाको उच्च गतिमा हाक्न सकिन्छ । नेपाली सडकमा यो एसयुभीले उत्कृष्ट माइलेजका साथमा राम्रो रोड पर्फमेन्स दिने विश्वास गर्न सकिन्छ ।
हाइटेक सेफ्टि फिचर्स
युरो एनक्यापले सेफ्टि मापदण्ड पुरा गरेबापत फाइभ स्टार रेटिङ दिएको यो एसयुभीमा चालक र सवार यात्रु सवैको सुरक्षाका लागी आवश्यक सवै अवयवहरु उपलव्ध गराइएको छ । पूर्ण क्षमताको ६ वटा कर्टेन एयरव्याग, टायर प्रेसर सेन्सर, अटोमेटिक इर्मजेन्सि ब्रेकिङ, ड्राइभर एटेन्सन अलर्ट, डिस्ट्यान्स अलर्ट, लेन डिपार्चर वार्निङ र ट्राफिक साइन रिकग्निसन लगायत अन्य थुप्रै हाइटेक सेफ्टि फिचर्स उपलव्ध गराइएको छ यो एसयुभीमा ।
अहिले नेपाली बजारमा युटिलिटी भेहिकल्सको बजार विस्तार भैरहेको छ । यस्तो समयमा भित्रिएको युरोपको उत्कृष्ट कारबाट सम्मानित पिउजो ३००८ ले बजारमा कस्तो प्रभाव पार्ला ? उत्तरका लागी केही समय अवश्यै कुनुैपर्ने छ । यद्यपि शुरुवाती समयमा यो गाडी जुन परिणाममा विक्री भैरहेको छ यसको आधारमा हेर्दा सोचेअनुसार नै सफल हुने निश्चित छ ।
कम्प्याक्ट एसयुभी सेग्मेन्ट अन्र्तगत नेपाली बजारमा थुप्र्रै ब्राण्डका गाडी उपलव्ध भएपनि प्रिमियम सेग्मेन्टमा भने कम नै छ । युरोपियन ब्राण्ड भएको हुँदा यसको मुल्य केही बढी छ । दुईवटा भेरियन्टमा उपलव्ध यो कारको मुल्य कम्पनीले १ करोड १३ लाख र १ करोड १९ लाख रुपियाँ तोकेको छ । यस हिसावले यो एसयुभीको मुख्यत फक्सवागनको न्यु टिगुआनसँग प्रतिस्पर्धा हुने देखिन्छ । सांग्रिला मोटर्सले ल्याएको सुविधासम्पन्न यो कारको सार्वजनिकीकरण जति भव्य भएको थियो बजार समेत उत्तिकै भव्य हने अपेक्षा गर्न सकिन्छ ।
Engine 1.6L e-THP 165 S&S
Maximum Power(hp@rpm) 165@6000
Maximum Torque(Nm@rpm) 240@1400
Transmisson6Speed Automatic
Fule Tank Capacity( Litres) 53
Maximum Speed(Km/h) 208
Ground Clearance(mm) 219
Dimensens (LxWxH) 4447x1841x1620 mm
Boot Space(Litres) 1670
Price(Lakh) 1,130,000 and 1,190,000
स्थानीय जनप्रतिनिधिको सुविधामुखी चरित्र, गाडी भाडामै लाखौं खर्च
काठमाडौं— महँगो भाडामा गाडी चढेर स्थानीय तहका जनप्रतिनिधिले सुविधामुखी चरित्र दे...
आयो ड्रम ब्रेकमा पनि टीभीएस एनटर्क, मूल्य २ लाख १४ हजार ९००
काठमाडौं – नेपाली बजारमा नन–डिस्क अर्थात ड्रम ब्रेकमा पनि टीभीएस एनट...
लालबन्दी–निजगढ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया सुरु
काठमाडौं – रेल विभागले लालबन्दी–निजगढ रेलमार्ग निर्माण प्रक्रिया अघि...